Jona 2021 7 Lahatsoratra
Nobodoina nymasoivoho Libyana ao Dubai ary nesorina ny saina!
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana24 Febroary 2011
Ho valin'ny famonoana izay nitranga tany Libya sy ny tsy fahafahan'ny mpanao gazety manao ny asany, ny mpanao fihetsiketsehana ao Dubai, UAE, dia nankeny amin'ny masoivoho Libiana ny talata mba hitaky ny fanajanona ny fandatsahan-drà ary hanongana ny Kolonely Muammar Gaddafi.
Tselatra · Eoropa Afovoany & Atsinanana24 Febroary 2011
Bahrain: Niteraka Haromontana sy Tsy Fitokisana ny Vaovao Mikasika Ilay Fanafihana Tamin'ny Vao Mangiran-dratsy
Raha nifoha maraina handeha hamonjy ny toeram-piasana ny vahoaka rehetra manerana an'i Bahrain androany (Alakamisy faha 17 Febroary, 2011) dia taitra raha naheno vaovao mikasika ny fanafihana nataon'ny mpitandron'ny filaminana tamin'ny andro vao mangiran-dratsy an'ireo mpanohitra ny governemanta izay nilasy tao Fihodinan'i Lulu renivohitr'i Manama. Nitobaka ny fanehoana haromontana, tahotra...
Bahrain: Fankatoavana ireo Maritiora
Hatramin'ny Asabotsy, nanao fihetsiketsehana tamim-pilaminana sy tamin-kalalahana ireo mpanohitra ny fanjakana tany amin'ny Rondpoint Pearl (Lulu). Manamarika ny andro fahavalon'ny Andron'ny hetsi-panoherana mifono hatezeran'i Bahrain androany, satria dia nanao diabe avy any amin'ny tranobe fivarotana any Bahrain ka hatrany amin'ny Roindpoint Pearl (Lulu) ho mariky ny fankatoavana ireo maritoira valo...
Gabon: Ny tolona tsy hita maso loatra
Gabòna21 Febroary 2011
Tsy nahombiazana tamin'ny lazany ny fanoherana tany Gabon teo amin'ny sehatry ny vaovao iraisam-pirenena fa mbola variana nitodika tany amin'ny krizin'i Ejipta ny olon-drehetra. Nanontany tena i Mohamed Keita ao amin'ny Komity hoan'ny Fiarovana ny mpanao gazety (CPJ) hoe “tsy maneho an-tsary ny tena sivana ny vaovao tsy marina” any...
VAOVAO MAFANA Bahrain: Mihamafy ny fitifirana any amin'ny renivohitra
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana20 Febroary 2011
Nirotsaka tao amin'ny Twitter ireo tatitra mikasika ny fitifirana tany amin'ireo toerana samy hafa tany Manama renivohitra ny harivan'ny Zoma. Namaritra ny korontana fa miomana amin'ny fandatsahan-drà sy alahelo mihoatra noho izao i Bahrain.
Iran: Martioran'iza izy ?
Samy niady an'i Saleh Jaleh ho martiorany na ny Iraniana mpanohana ny fitondrana na ny hery mpanohitra. Maty voatifitra basy izy tamin'ny 14 Febroary fony ny mpanohitra nanao fihetsiketsehana tany Tehran sy tany amin'ny tanàna maro hafa.
Bahrain: Olona iray no namoy ny ainy nandritra ny fanafihana nataon'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny andro vao mangiran-dratsy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana19 Febroary 2011
Efa notaterinay tetsy sy teroa ny fanafihana tamin'ny andro vao mangiran-dratsy izay nataon'ny mpitandro ny filaminan'i Bahrain an'ireo mpanohitra izay nitangorona tao amin'ny Rond-point Pearl tao Manama renivohitra nanomboka ny 14 February 2011. Ankehitriny dia fantatra fa olona iray no namoy ny ainy nandritra ny fifandonana.